‘छक्का पन्जा ३’ र ‘जय भोले’को होला फाइनल खेल ? « Ramailo छ
‘छक्का पन्जा ३’ र ‘जय भोले’को होला फाइनल खेल ?
यो वर्षको दशैँ नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि विशेष छ । कारण: यो मितिमा दुई ठुला फिल्म रिलिज हुँदैछन् । दीपाश्री निरौला निर्देशित ‘छक्का पन्जा ३’ र अशोक शर्मा निर्देशित ‘जय भोले’ले दशैँमै आउने घोषणा गर्दा फिल्म क्षेत्रको ध्यान दशैँमै छ ।
रोचक कुरा त के छ भने, यी दुवै फिल्मले दशैँमा आउने बताएता पनि कुन डेटमा आउने ? त्यो तय गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यदि यी दुई फिल्म जुधेको खण्डमा सम्भवत: वर्षकै ठुलो भिडन्त हुनेछ । केहि दिन अगाडी ‘जय भोले’ले गीत रिलिज गर्दै दशैँमै आउने दावी गरेको थियो । निर्देशक शर्माले दुई पक्षिय कुरा भैरहे पनि दशैँमा ‘जय भोले’ हेर्न तयार हुन दर्शकलाई आग्रह गरेका थिए । उनको भनाईले दशैँबाट ‘छक्का पन्जा ३’ पछी हट्न सक्ने र ‘जय भोले’ सोलो रिलिज हुने प्रष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो ।
अब कुरा गरौं ‘छक्का पन्जा ३’को, यो फिल्म अहिले छायाँकनरत छ । यसका अघिल्ला दुई भाग बक्स अफिसमा ब्लकबस्टर छन् । सबैभन्दा ठुलो ब्राण्ड भ्यालु बोकेको ‘छक्का पन्जा ३’ यसै पछाडी सर्छ जस्तो लाग्दैन ।
निर्देशक दीपाश्री निरौलाले विश्वकपको फाइदा उठाउँदै घुमाउरो पारामा ‘जय भोले’सँग ‘छक्का पन्जा ३’को फाइनल हुने संकेत दिएकी छन् । उनले सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा आफ्नो टिमको फोटो शेयर गर्दै ‘हाम्रो फाइनल दशैँ’मा क्याप्सन दिएकी छन् ।
हाम्रो फ़ाइनल दशैमा
A post shared by Deepa Shree Niraula (@deepashreeniraula) on Jun 16, 2018 at 9:17pm PDT
यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने ‘छक्का पन्जा ३’ ‘जय भोले’सँग जुध्न तयार छ । के ‘जय भोले’ले फाइनल खेल्ने आँट गर्ला त ?